China 55inch emgangathweni ukuma zonke kwindawo enye 2000cd manzi IP65 totem ukubonisa yangaphandle touch screen lcd interactive kwikiosk factory kunye nabavelisi | Layson
55inch emgangathweni yima yonke kwindawo enye 2000cd manzi IP65 totem ukubonisa ngaphandle touch screen lcd kwikiosk interactive
1. Intsimbi eyenziwe ngesinyithi + ukupeyinta amandla angaphandle, ukuchasana nomhlwa ngaphezulu kweminyaka eyi-10.
2. I-AG thabatha iglasi ebonisa i-5 mm, ukukhanya okudluliswa kwe-97%, ukubonakaliswa kungaphantsi kwe-3%, i-laminating, inwebu enobungqina bokudubula umphezulu.
3. I-air-conditioner eyakhelwe-ngaphakathi, kunye ne-patent ehlakaniphile ngokupheleleyo iteknoloji yokulawula ubushushu obuquka umsebenzi wokufudumeza.
4. Ukuqaqamba: inenzwa yokuqaqamba, i-auto-adjustment njengokwahlukileyo emini ukuthoba amandla okusebenzisa amandla, ubuninzi obuqhelekileyo be-2000nits.
5. Inxalenye ye-elektroniki: Ukhuseleko lokuvuza kombane, ukhuseleko lombane.
6. Amandla: Ibhodi yamandla ye-Industrial-grade, ukukhanya kwe-auto-adjustment ukuthoba ukusetyenziswa kwamandla.
7. I-10-point capacitive touch ibonelela ngamava ochukumisayo ogqibeleleyo.
-Ukusebenza ngeentsuku ezinelanga
Ukukhanya kwesikrini ukusuka kwi-1500nits-2000nits, inkqubo yokulawula ukukhanya okuzenzekelayo iqinisekisa ukuba i-LCD ayizukujika ibe mnyama phantsi kokukhanya kwelanga ngqo.
-Ukusebenza kubushushu obuphezulu be-Intelligent abalandeli benkqubo yokupholisa, Ukusebenza ubushushu obuphezulu ukuya kuthi ga kwi-55 ℃
-Ukusebenza kubushushu obuphantsi Inkqubo yobushushu obukrelekrele, Ukusebenza ubushushu obuphantsi ukuya ku -20 ℃
-Ukusebenza ngeentsuku ezinemvula Indawo ekhethekileyo evaliweyo evaliweyo ukuze isetyenziswe ngaphandle, Ingangeni manzi kwaye idibana ne-IP65. Iplagi yobungqina bamanzi kunye neglue yobungqina bamanzi ukuqinisekisa ukuba akukho mvula evuzayo ngeentsuku zemvula. Inkqubo yokulawula ubushushu obupholileyo befeni.
Inkqubo yoqwalaselo Iinketho ezininzi-IPC Eyongezelelweyo okanye ephuculweyo yePC IPC yoshishino olulodwa inokudityaniswa kwiinkqubo ezinenkqubo yomba yolwazi efunekayo-IMedia Player Embedded Media player Multi-function media player engenelwe lula ukusebenza-Touch screen Yamkela itekhnoloji yefoil echukumisayo enovakalelo oluphezulu kwaye ukuzikhusela kwiziphumo zangaphandle-4G Module IP65 ii-eriyali, umzila, ikhadi le-3G, imodyuli ye-4G kunye nezihlanganisi zokufikelela kwi-intanethi
Umboniso obambeneyo oyilwe ngamandla ofanele nayiphi na imeko engqongileyo. Thembela kukuqina okuqinileyo kwe-24/7 kuyo nayiphi na imeko. Yazisa ngemiyalezo yeshishini 24/7 naxa imiqondiso ibekwe kwilanga elithe ngqo okanye elingathanga ngqo, okanye kwiimeko ezinzima zokusingqongileyo ezinjengothuli, amanzi kunye nobushushu. Yenzelwe ukuba inyamezele amaqondo obushushu aphezulu anokumelana noluhlu olubanzi lokusebenza: -30°C (-22°F) ukuya kuma-50°C (122°F) ukuguquguquka kobushushu.Yenza lula imiqondiso yangaphandle kunye nesisombululo se-in-one. Ukufakela ngokulula nangokulula, ukuyila kunye nokusebenzisa imiqondiso yangaphandle enothotho oluquka zonke iimpawu kumboniso omnye. Uyilo olubandakanya konke lubonisa ukukhuselwa kwe-ingress, iteknoloji yokuchasana nokubonakalisa kunye nokukhusela umonakalo. Onke amacandelo afika edityaniswe ngokugqibeleleyo. I-enclosure elula ayifuni malungu ongezelelweyo, ngoko ilungele ngokupheleleyo nayiphi na indawo.
Ngaphambili: Ubhaka wesikrini we-LCD onesikrini sentengiso esihamba ngesikrini esiphathwayo
Okulandelayo: Uyilo lwesiseko lwe-K 32inch 43inch touch screem query self checkout machine,touch screen kiosk with QR code scanner IC ID card reader
KwiKiosk yeMiqondiso yeDijithali yangaphandle
KwiKiosk yoLwazi lwangaphandle
IKiosk yokuTouch yangaphandle yesikrini
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Udonga lweVidiyo yoMqondiso weDijithali, Intengiso yeTouch Screen Kiosk, Imiqondiso yeDigital Directory, Dooh Umqondiso weDijithali, Imiqondiso yeDijithali yeSikolo, Itheyibhile yeDiy Touch Screen, Zonke iimveliso